Cimilada: Tiknooloojiyada ugu dambeeyay ee badbaadiya Malaayiin Lives
Ross Barker, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa la wadaagaya sheeko cajiib ah sida UNICEF ay gacan ka geysatay dhalinyarada iyadoo la adeegsanayo barnaamijka casriga ah ee loo yaqaan 'U-Reporting'
Dadku waxay badanaa tixgeliyaan UNICEF inay mas'uul ka noqoto baahida carruurta illaa ururkani uu badbaadiyey dhalinyarada tirade badan. Gaar ahaan, waxay sii wadaa inay cadeeyo inay si deg deg ah uga jawaabeyso Hurricane Irma. Iyada oo la socota U-Report, mareeg SMS ah oo leh qaab-u-helidda muuqaalka, waxay bixiyaan macluumaad iyo amniga badbaadada si wax ku ool ah dhibbanayaasha suurtogalka ah. Inkasta oo ay tahay kaliya sheeko fudud, waana arrin cajiib ah - zocdoc setup.
Codsi Dhaq-dhaqaaq Degdeg ah
Intii lagu jiray 2-dii Sebtembar, xafiisyada UNICEF ee Latin America iyo Caribbean waxay xiriir la sameeyeen khabiiro ka socda Xarunta Caalamiga ah ee Innovation Center ee UNICEF. Sababta tani waxay ahayd in la bilaabo U-Report in the Caribbean iyo in ay kor u qaadaan iyada oo loo marayo Facebook, sida ay jawaab u tahay cusboonaysiinta Hurricane Irma ee dooxada.
Habka Haboon ee Isgaadhsiinta
Qorshaha cusub ee isgaadhsiinta, oo loo yaqaan 'U-Report', wuxuu shaqaaleeyaa SMS ama farsamada qoraalka oo leh soo-saarka sawir-qaadidda, si loogu sahlo ururinta iyo faafinta muhimad, macluumaad nolol badbaadin ah oo loogu talagalay dhalinyarada. Waxaa intaa dheer, codsigu wuxuu u dhaqmaa si macno leh iyaga oo codsanaya dhibaatooyinkooda iyo codsiga caawimaadda. Sidaa daraadeed, U-Report wuxuu si dhab ah u xisaabiyaa sidii hal-abuurnimo isbeddel oo loogu talagalay daryeelka bulshada..
Waagii hore, U-Report ayaa loo isticmaalay si looga hortago faafinta fayruska Ebola ee Liberia dib loogu soo celiyo 2014. Codsigana, UNICEF iyo hay'adaha isbahaysiga ah ayaa soo diri kara codbixin si loo aqoonsado arrimaha ay dadku la kulmaan oo ay la wadaagaan iyaga helitaanka macluumaadka iyo tilmaamo nolol badbaadin ah
Ilaha Warka Xogta
In ka badan 10.5 milyan oo carruur ah oo ku nool dalalka ku wajahan wajiga Hurricane Irma, qiyaas ahaan kala badh waxay sheegeen in U-Report uu yahay ilaha macluumaadka iyo talooyinka badbaadada ee la heli karo. Inkasta oo duufaantu ay dhaafto, UNICEF waxay sii wadi doontaa in ay ka faa'iidaysato mashruuc si ay u uruuriso macluumaadka ku saabsan goobaha dhalinyarada u baahan gargaar. Taas ka dib, UNICEF waxaa laga yaabaa inay bilawdo jawaabaha jawaabaha la siiyo baahiyaha kuwa ay dhibaatadu saameysey.
Alaabooyinka soo socda ee Kobanheegan
Iyadoo laga jawaabayo baahida jirta, Qeybta Waxyaabaha Qalabka ee UNICEF ee ku yaalla Kobanheegan ayaa bilaabay inay shaqeeyaan. Iyadoo bakhaarada ugu weyn ee adduunka, waxay awood u leeyihiin inay gargaar bini'aadannimo siiyaan dhibbanayaasha. Hadda, waxay bilaabeen inay soo saaraan sahayda iyo gawaarida diyaaradaha.
Rajayntu weligeed ma dhiman doonto
Iyadoo ay ku jiraan mowqifkooda SMS-ka, U-Report, UNICEF waxa ay u suurtagashay in ay si dhakhso ah uga jawaabaan musiibada soo socota, halka dhallinta loogu talagalay macnaha isgaarsiinta iyo ilaha macluumaadka. Thanks to U-Report, iyada oo tiknoolajiyad tiknoolajiyadeed iyo muuqaalinta muuqaalka, tilmaamaha badbaadada si dhakhso ah ugu faafay tobankii iyo badh malaayiin dhalinyaro ah oo ku saabsanaa duufaanta, iyagoo badbaadiyay nolol aan tiro lahayn. Hadda, UNICEF waxay u dirtaa sahayda cuntada iyo qalabka kale ee gargaarka. Guud ahaan, rajadu ma dhiman doonto illaa iyo inta ay dadku sii wadaan taageerada dadka kale.